AmaNgqina KaYehova EHungary Ayanconywa
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBasque IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiCatalan IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFante IsiFinnish IsiFrentshi IsiGalician IsiGeorgia IsiGrike IsiGun IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKabyle IsiKannada IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMingrelian IsiMixe IsiNahuatl (saseCentral) IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRarotonga IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTahiti IsiTajiki IsiTarascan IsiTelugu IsiTigrinya IsiTlapanec IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUzbek IsiValencian IsiXhosa IsiZulu isiZapotec (saseIsthmus)
NgoJuni 2013 izantyalantyala zemvula ezagaleleka ngamandla kuMbindi weYurophu zabangela izikhukula. Ngenxa yezi mvula, umlambo oseHungary obizwa ngokuba yiDanube uye waphuphuma.
Ngenxa yoku, umphathiswa ojongene nabasebenzi, wacela iofisi yesebe yamaNgqina kaYehova ukuba incede ekunqandeni umonakalo onokubangelwa zizikhukula. Iofisi yesebe yasabela kweli khwelo, kuba yacela amabandla akufuphi noMlambo iDanube ukuba ancedise abasemagunyeni kulo msebenzi.
Amabandla asabela kakuhle gqitha. Kwiintsuku ezalandelayo amaNgqina angaphezu kwayi-900 aphuma kumabandla ayi-72 ancedisa kulo msebenzi ekhusela umlambo kwizikhukula ezaziza kuza. Ayenxibe iibheji ezinamagama abo, isixeko asuka kuso negama elithi “AmaNgqina KaYehova.”
Kwesinye isixeko, ummeli wombutho obizwa ngokuba yiRed Cross wabhalela elinye ibandla wathi: “Sibamba ngazo zozibini ngoncedo lwenu, ayiqhelekanga into yokubona abantu abamanyeneyo nabazincama njengani, singasathethi ke ngemigama emide eniyihambileyo! Umzekelo wenu uhamba wodwa kwesi sixeko sethu!”
Usihlalo womnye umbutho onceda ngamaxesha entlekele, nokwalilungu lePalamente yaseHungary uye wathumela ileta yombulelo kwiofisi yesebe yamaNgqina.